January 2021 - Myanmar Fire Services Department
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ငဖဲမြို့နယ်၊ လေးအိမ်စုကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
editor | Jan 31, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၃၀.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ငဖဲမြို့နယ်၊ လေးအိမ်စုကျေးရွာနေ ပိုင်ရှင် ဒေါ်ချို ၏ (၁၆x၁၆)ပေ၊ သက်ငယ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်း (၁)ထပ် နေအိမ်တွင် မီးဖိုမီးကြွင်းမီးကျန်မှတစ်ဆင့် အကာထရံသို့ မီးကူးစက်လောင်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း ၁၃ ၅၅ အချိန်သတင်းရရှိသဖြင့်...
ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့နယ်၊ ဟားခါး-ထန်တလန်ကားလမ်း၊ မိုင်တိုင် အမှတ် (၃/၁)နှင့် (၃/၂)အကြားတွင် ချောက်အတွင်းသို့ ယာဉ� ....
editor | Jan 31, 2021 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၃၀.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၄ ၂၀ အချိန်ခန့်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့နယ်၊ ဟားခါး-ထန်တလန်ကားလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၃/၁)နှင့် (၃/၂)အကြားတွင် ထန်တလန်ဘက်မှ ဟားခါးဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဦးချွမ်းလိန်း မောင်းနှင်သည့် PRADO (ခဲရောင်)ယာဉ်သည် မောင်းနှင်လာစဉ် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းအောက်...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောက်မြို့နယ်၊ ဓာတ်မြေကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
editor | Jan 30, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၂၉.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၀၉ ၂၀ အချိန်ခန့်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောက်မြို့နယ်၊ ဓာတ်မြေကျေးရွာအုပ်စု၊ ဓာတ်မြေကျေးရွာနေ ပိုင်ရှင် ဦးစိုးမင်း၏ (၁၇x၁၄)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်း နေအိမ်တွင် 30 W ဆိုလာပြားနှင့် 12 V ဘက်ထရီသို့ ဆက်သွယ်ထားသော ဝါယာကြိုးများ...
House fire in Kyaukme township, Shan state
editor | Jan 29, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
On 28 Jan, at about 12 50, fire occurred at the house (20’x40′),asingle storey building, located at the Naungwain village, Kyaukme township, Shan state. The fire started from the malfunctioning wiring system and spread to the nearest wall. At 13 05,...
House fire in HlaingBwe township, Kayin state
On 28 Jan, at about 06 05, house fire occurred at the Kamawlae village, Myainggyingu, Hlaingbwe township, Kayin state. The house wasasingle storey building and the fire started from the kitchen place. At 07 00, Myaingyingu local fire station responded to the fire...